Ukukhetha kwami ​​izincwadi zonyaka. Isibuyekezo | Izincwadi Zezindaba
UMariola Diaz-Cano Arevalo | 27/12/2021 12:00 | Amahlaya, Abalobi, Amabhuku, I-Novela, Inoveli emnyama, Izindaba
U-2021 uyaphela. Omunye unyaka wokufunda, ngaphansi kwalokho obekungaba khona, kodwa kuyadingeka njalo. Nokho, kungase kube iminyaka yami, kodwa okwesikhashana manje umunwe wami esibhebheni kanye nezandla zami ephepheni aziqhaqhazeli lapho sengiyiqalile futhi ayizange ingiqinisekise. Ngaphambi kokuthi ngenze umzamo futhi ngiqedele. Ngiyazi ukuthi kunjani ukubhala incwadi kanye namahora nenqubo ekhandlayo yokukhiqiza nokuphromotha ukuze uyithole kumfundi. Kodwa manje ... Noma kunjalo, lokho osekushiwo, kuyoba iminyaka futhi futhi wazi ukuthi ngeke sibe khona isikhathi esibonakalayo sokufunda konke ongathanda. Lokhu kukhetha kwezincwadi okomuntu siqu, ukuze kucace, kodwa futhi ngizogqamisa ezinye ezimbalwa ezithunyelwe ngaphambili. Ngethemba ukuthi ngonyaka ozayo uzoqhubeka nokusilethela izindaba ezimnandi. Jabulela u-2022!
Okokuqala usho lokho, sibonga abeluleme incwadi Fair kusuka eMadrid, ngikwazile ukubingelela nokuhalalisela abanye balaba babhali ngalezi zindaba ezikhethiwe, ezifana no-Domingo Villar, u-Daniel Martín Serrano noma u-Iñaki Biggi.
1 Ukufundwa konyaka
2 Okushiwo okukhethekile
3 Futhi uManuel Bianquetti
Yilokho isicoco samazwe ngamazwe engihlala naso. Akumangazi, njengoba isifunda esivamile esingifundayo sazi kude ukuthi uJo Nesbø uwubuthakathaka bami.
Insomnio - UDaniel Martin Serrano
Futhi le yi isicoco sesizwe engisigqamisayo walo nyaka. Ukuqala kunoveli - hhayi eyokubhala - yalo mbhali wesikrini, umbhali nothisha ongakwazanga ukwenza i-debut engcono.
Umdanso wehlanya - UVictoria Mas
Ngibe ne-non-venal edition njengesipho esivela kumngane futhi ngayilanda ngenye intambama. Okungajwayelekile inoveli yombhali ongumFulentshi uVictoria Mas eyangithinta inhliziyo futhi Bengilokhu ngincoma unyaka wonke. Ngenxa yamandla akhe, ukusola kwakhe kanye nesithombe sakhe senhlalo senkathi.
Akuzona izindaba ukuthi into ebhalwa nguDomingo Villar inhle, ngendlela yenoveli enamakhasi angama-600 noma incwadi. izindaba njengalezi. Ngemifanekiso emihle kakhulu njengoba abangani kuphela abangakwenzela, umphumela uba ukufunda kwantambama okukugcwalisa fantasy, imizwa kanye nostalgia.
A UCarlos Lombardi, UGuillermo Galván, owayeyiphoyisa owaphenduka umphenyi eMadrid yangemva kwempi, ngahlangana naye ngonyaka odlule futhi ngamthanda. Le ndaba yesithathu nayo inakho. Futhi ngaphezu kwezinhlelo zayo, le trilogy ingivelele ngayo isilungiselelo esihle yaleyo Madrid of the forties kanye ukunotha kwesitayela ekubhaleni kwakho.
Blacksad 6. Konke kuyawa, ingxenye yokuqala - UJuanjo Guarnido noJuan Díaz Canales
Iminyaka engamashumi amabili sithandana nalolu chungechunge lwenoveli eyingcaca - enezihloko eziyisi-6 kuphela - kanye nomseshi osezingeni eliphezulu ngendlela ethusayo. UJohn blacksad, lowo protagonist wekati elimnyama le-anthropomorphic. Indaba yakhe yesithupha ayisiphoxi kanti abawu-22 bazosilethela endalini yakhe.
UMoses Project - Iñaki Biggi
Unyaka ngiwuqale naye ngangakwazi ukwenza kangcono. Isithunzi esihle esisuka kulo mbhali waseSan Sebastian siya kulezo zindaba zamafilimu empi ezibekwe kwiNdebe Yomhlaba Yesibili enezihloko ezinjengezi Ishumi nambili kusukela esigxotsheni (inkomba yakho ecace kakhulu) noma Imigodi yaseNavarone.
Umfana onamabhande - Pere Cervantes
Enyakazayo futhi ehlala njalo ngesikhathi esifanayo le noveli ene isithombe esihle se-Barcelona yangemva kwempi, kanye nokuhlonishwa kwesinema, umlingiswa omkhulu kanye nezigelekeqe ezinhle kakhulu nezimbi kakhulu zalolu hlobo.
Futhi uManuel Bianquetti
Yebo yebo. Okuningi okutholakele kimina engikufundile Ukuhamba kofudu y Inhlekelele Yobhekilanga futhi uthole umlingiswa wayo, uManuel Bianquetti omkhulu ngayo yonke imiqondo edalwe nguBenito Olmo. Funda (noma kunalokho udliwe) esikhathini esingaphezudlwana kweviki, u-Bianquetti usengene ohlwini olukhethekile lwabalingiswa abaphambili bohlobo oluthathwa ngokushesha. ucezu lwenhliziyo yami emnyama. Nakulo nyaka ngizifundile izindaba zakho, Okubomvu okukhulu, nomunye umlingiswa onothando. Kodwa nakanjani ngihlala no-Bianquetti.
Futhi, okungcono kakhulu kuye kwaba ngikwazile ukukutshela mathupha a UBenito Olmo futhi wazi ukuthi kuzoba yini inguqulo yefilimu eseyakhiqizwa futhi nabalingisi, okuyiqiniso, abashaya kahle okungenani isithonjana sami esicatshangelwayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Amabhuku » Ukukhetha kwami ​​izincwadi zonyaka. Isibuyekezo
Ibhalwa kanjani incwadi futhi uyishicilele